राजनीतिक आन्दोलनलाई सिफ्ट गरी आर्थिक मुद्दाको नेतृत्व गरिरहेका छौं
गोविन्दराज केसी, संयोजक- राजनैतिक संवाद तथा छलफल समिति, प्रदेश नं. ४
वैकल्पिक राजनीतिक धारको नेतृत्व गर्ने भन्दै सुरु भएको नयाँ शक्ति नेपाल अहिले प्रत्येक प्रदेशको भेला तथा प्रशिक्षणसंगै कार्यविभाजनको कामलाई पनि तिब्रता दिनेक्रममा छ । यसैक्रममा भर्खरै ४ नं प्रदेशको भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । सोही सन्दर्भमा नयाँ शक्ति नेपालका केन्द्रीय परिषद सदस्य तथा प्रदेश नं ४ राजनैतिक संवाद तथा छलफल समितिका संयोजक गोविन्दराज केसीसंग सरोज गौतमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश )
ईतिहासको खास खास चरणमा समयले सशक्त संगठन र राजनैतिक नेतृत्वको जन्म दिन्छ । २००७ साल देखि उठेको संविधानको मुद्दालाई पूर्णता दिंदै हामी राजनैतिक आन्दोलनलाई सिफ्ट गरी आर्थिक विकासको मुद्दामा सिङ्गो देशलाई गोलबद्ध गरेका छौं । यो सन्दर्भमा नयाँ शक्तिको जन्म भएको हो । संगठन निर्माण, बिस्तार र सुदृढिकरणमध्ये नयाँ शक्ति यतिबेला देशैभरी संगठन बिस्तारसँगै सुदृढिकरणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । झन्डै ७ महिनाको अवधिमा देशभित्र मात्र होईन विदेशमा रहेका नेपालीहरुको माझमा समेत यो निकै बिस्तार र लोकप्रिय भईसकेको छ । ब्यापक जनसमुदायको सहयोग र समर्थनमा नयाँ शक्ति अगाडी बढिरहेको छ ।
प्रदेश नं ४ मा संगठनको स्थिति कस्तो छ ?
संगठनको अवस्था कहाँ पुग्यो भनेर मापन निर्वाचन प्रक्रियामा हुनेगर्छ । नयाँ शक्ति प्रारम्भिक चरणमै भएकोले अहिलेसम्म निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल भईसकेको छैन । यसर्थ हाम्रो वास्तविक स्थिति यहि नै हो भनेर दावी गर्ने हामीसंग त्यस्तो भरपर्दो मापदण्ड छैन । देश आगामी चुनावको तयारी प्रक्रियामा जाँदै गर्दा नयाँ शक्ति पनि त्यसको सामना गर्न आफ्ना सरदामहरु जोडजाड गर्दैछ । यही प्रक्रियाअन्तर्गत ४ नं प्रदेशमा मनाङबाहेक सबै जिल्लाहरुको संगठन निर्माण भइसकेको छ र गाविस (गाउँपालिकाहरु) मा प्रवेश गरेका छौं । अहिले यति भन्न सकिन्छ कि जनताको आकर्षण देख्दा आगामी निर्वाचनमा नै हामी यो देशको मुख्य पार्टी बन्छौं ।
तपाईका आगामी कार्यक्रमिक लक्ष्यहरु के-के छन् ?
विभिन्न राजनीतिक दलहरुमा छरिएर रहेका समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरुसंग बहस छलफल गर्ने, विकास निर्माणसंग सम्बन्धित सवालहरुमा राष्ट्रिय बहस सञ्चालन गर्ने, प्रदेशका सम्पदाहरुको दिगो उपयोग कसरी गर्ने भन्ने बिषयमा वृहंगम् बहस सरु गर्दै सोहि स्तरको राजनैतिक वैचारिक नेतृत्वको विकास गर्ने हाम्रो मुख्य अभिप्राय हो । हामी केहि विशिष्ट आन्तरिक हिसाबले सम्पादन गर्नैपर्ने केहि खास लक्ष्यहरु पनि निर्धारण गरेका छौं । यो मध्ये २० हजार पार्टी सदस्य थप गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको छ । महंगी, कालोबजारी, भ्रष्टाचार बिरुद्ध संघर्ष गर्ने, महिला हिंसा, छुवाछुत तथा अन्य सामाजिक विभेदका विरुद्ध सरकारी निकायलाई झक्झकाउने गरी संघर्षका कार्यक्रमहरु पनि तय गरेका छौं ।
राजनैतिक, कार्यक्रमिक र सांगठनिकरुपमा तपाईहरु कसरी नयाँ ? तपाईहरु वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति हो भनेर जनताले कसरी थाहा पाउने ?
कुनै पनि पार्टीको खास लक्ष्य राजकिय सत्तामाथिको नियन्त्रण नै हो तर हाम्रो सन्दर्भ अलिक फरक छ । हामि नीति र विधि स्थापित गर्न चाहन्छौं । राजनैतिक दलहरु त बग्रेल्ति खोलिने तर तिनीहरुको खास उद्देश्य निहितस्वार्थको लागि मात्र वा कसैप्रतिको असन्तुष्टिमा प्रकट हुने नियतिको रुपमा देखियो । यसको अन्त्य नगरी विकासको ढोका खुल्दैन । हामीले राजनैतिक हिसाबले एउटा चरणको आन्दोलन सफलतामा सम्पन्न गर्‍यौं तर ती उपलब्धीहरु संस्थागत गर्न आर्थिक विकास जरुरी छ नत्र उपलब्धी उल्टन सक्छन् भनेका छौं । तर अन्य राजनीतिक दलहरु हिंजोको विरासतबाट माथि उठ्न सकेको देखिंदैन । अझै राजनैतिक आन्दोलन सम्पन्न भएको छैन भन्ने छ यो मानेमा हामी अरु भन्दा अगाडि छौं ।
यसमा सबै साथीहरु अभियन्ताहरु छन् । शासकिय स्वरुपमा देशलाई प्रत्यक्ष कार्यकारीमार्फत् अगाडी बढाउने कुरामा दृढतापूर्वक मुद्दा उठाइरहिएको छ । आर्थिक मुद्दामा देशलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालीन योजनामार्फत् विकास गर्ने स्पष्ट खाका पेश गरेका छौं । आर्थिक झट्काहरुबाट बाँच्न व्यापार विविधिकरणको उपाय अबलम्बन गरि नीति तर्जुमा गर्न प्रयत्न गरिने छ । त्यसैगरी संगठनको सन्दर्भमा नेपालमा रहेका विभिन्न समूहको प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रतिनिधित्व गराउने ठोस निर्णय गरेको छ। जनजाति/आदिवासी, खास/आर्य, मधेशी/थारु तथा महिला, दलित, र अन्य उत्पीडित वर्ग, क्षेत्रलाई समेटने गरी कार्य बिन्यास समेत गरेको छ । जुन संगठनको सन्दर्भमा बिल्कुलै नयाँ प्रयोग हो । जुन प्रयोग तपाईं समकालीन अन्य संगठनमा देख्नुहुन्न ।
प्रदेश नं ४ मा के-के योजनाहरु छन ? यस क्षेत्रको सम्वृद्धि लागि नयाँ शक्ति कसरी लाग्छ ?
तत्कालिन साँगठानिक हिसाबले हामी ३ महिने कार्यक्रमका साथ देशभरि संगठन निर्माणको लागि जाँदैछौं । यो क्षेत्रमा पनि तिव्र ढंगले संगठनको बिस्तारमा हामी हुनेछौं । जब आर्थिक विकास र समृद्धिको सवाल छ यो कम्तिमा पनि शासन सत्तासंग जोडिएको सवाल हो । अहिले हामीले गर्न सक्ने भनेको भोलिको विकासको लागि मार्ग-चित्र कोर्ने हो । ४ नं प्रदेश सम्भावना नै सम्भावनाले युक्त प्रदेश हो । तर राजनैतिक नेतृत्व सवल, सक्षम, दुरदृष्टि नभएकोले आज हामी गम्भीर समस्याबाट गुज्रिरहेका छौं । चीनदेखि भारतसम्म जोडिएको नाका हामीसंग छ । नवीकरणीय उर्जामध्ये जल स्रोतको कोणबाट हामी नेपाल भरी नै अग्रपंक्तिमा छौं । झन्डै ८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता यस प्रदेशले राख्छ ।
पर्यटकीय दृष्टिले पनि यो क्षेत्र सबै भन्दा अगाडि छ । धार्मिक पर्यटनको सम्भावना पानि त्यतिकै छ । लुम्बिनी-पोखरा-मुक्तिनाथको धार्मिक करिडोरको निर्माणबाट लाखौं पर्यटक भित्र्याउन सक्ने हो भने यो प्रदेश हिन्दू र बौद्ध धर्मको केन्द्र बन्ने निश्चित छ । जंगल जडिबुटी पनि यो क्षेत्रमा प्रचुर मात्रमा पाईन्छ । खनिज पदार्थमा तामा, फलामको लागि बाग्लुङ, पर्वत, तनहुँ शिशाको लागि गणेश हिमाल सुन तथा पेट्रोलियम पदार्थका खानीहरु रहेको प्रारम्भिक सर्वेक्षणले देखाएका छन् । यसको लागि सवल र सक्षम जनशक्ति र नेतृत्वको जरुरी छ । शिक्षा, स्वास्थ्यको सम्बन्धमा पनि खास पहल लिन जरुरी छ । प्रदेशमा कति र कुन प्रकृतिका विश्वविद्यालय खोल्ने, निजी क्षेत्रको भूमिका ठोस र निश्चित गरिदिनुपर्छ । जसले राज्य र निजी क्षेत्रकोबीच अनावश्यक खटपट र शंका सृजना नहोस् ।
पार्टी घोषणा नहुँदै पूर्व-माओवादी र गैर-माओवादीबीच विवाद छ भन्ने सुनिन्छ नि ?
पार्टी भनेको समाजमा रहेका विभिन्न प्रवर्ग, समूह र विचारहरुको केन्द्रिकरण हो । नयाँ शक्ति त झन विभिन्न प्रतिविचारहरुको समिश्रण हो । समाजवादी, पुँजीवादी, भौतिकवादी, अध्यात्मवादी, मार्क्सवादी, फुकोवादी, गैससवादी जस्ता चिन्तन-धाराहरुको बलियो उपस्थिति यसमा रहेको सबैमा जगजाहेर नै छ । यस्ता विपरीत प्रवृत्तिहरुको व्यवस्थापन निकै जटिल कार्य हो र नेतृत्वको कुशलता पनि यहि बेला मापन हुने गर्छ । यी प्रवृत्तिहरुको भीषण वैचारिक संघर्षबाट मात्र नयाँ शक्तिको उदय सम्भव छ । यसर्थ लामो माओवादी प्रशिक्षणबाट र बाहिर पश्चिमा प्रजातन्त्रको प्रभावबाट आएका साथीहरुको बीचमा हुने राजनैतिक संघर्ष प्रारम्भिक चरणमा स्वभाविक हो भन्ने म ठान्छु ।
यस्तो अवस्थामा नयाँ शक्तिको वैकल्पिक राजनीतिक धारको रुपमा सफल हुने आधारहरु के-के छन् ?
७० वर्षको अन्तरालमा हामीले प्राप्त गरेको राजनैतिक उपलब्धि मात्र हो । आर्थिक रुपान्तरणको पाटो बल्ल सुरु भएको छ। जनसांख्यिक लाभको हिसाबले हामी निकै युनिक अवस्थामा छौं । बालमृत्युदर तथा मातृमृत्युदर घट्दो छ । काम गर्ने उमेरका युवाको संख्या सबैभन्दा धेरै छ । यिनीहरुलाई सही ढंगले परिचालन गर्ने योजना तत्काल ल्याउनुपर्छ । सबैभन्दा महत्वकांक्षी युवा जो सीप, क्षमतायुक्त छन्, विदेशी विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन् । हामीसंग पर्याप्त सम्भावना छन् । यो समूह तिव्र आर्थिक विकास चाहन्छ, जो नयाँ शक्तिको मुख्य एजेण्डा हो ।
छिमेकीहरु तिव्र आर्थिक विकास गर्दै छन् । छिमेकीसंग पारस्पारिक सम्बन्ध कायम राख्दै तिव्र आर्थिक विकास, प्रभावकारी कुटनीति र एकीकृत सुरक्षा नीतिको माध्यमबाट आन्तरिक राष्ट्रियता मजबुत बनाउँदा सिङ्गो देश आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडी बढन सक्छ । यसैगरी नेतृत्वको कोणबाट हेर्दा लामो समय देश तथा विदेशका बिभिन्न नीति निर्माणको तहमा बसेर काम सम्पादन गरेको सक्षम, दक्ष अनुभवी र दुरदृष्टी भएको नेतृत्वको समूह हामीसंग छ । हाम्रो सफल हुने आधारहरु यिनै हुन् ।